Acompli dia mpanjifa mailaka feno | Androidsis
Acompli no fampiharana mailaka miaraka amin'ny kalandriany manokana sy ny fanohanana ireo serivisy fitahirizana rahona izay Nahazo ny mpankafy azy izy nandritra ny volana maro niasany tamin'ny iOS ary midina amin'ny Android izao mba hanao toy izany koa.
Ny tanjon'ity fampiharana ity dia ny mandefa anao ireo mailaka manan-danja indrindra eo an-tampon'ny boaty, mamela ireo izay tsy dia manandanja loatra. Accompli mampiasa algorithm izay manome laharam-pahamehana ny mailaka arakaraka ny isan'ny nifandraisany tamin'ny mpandefa na olona.
Amin'ny alàlan'ny fananana asa mifandraika amin'ny kalandrie sy fanohanana fitehirizana rahona ho an'ny Dropbox, Google Drive, ary OneDrive, Acompli dia afaka mampianatra ny fizarana rakitra, fanendrena ary mailaka mifandraika miaraka amin'ireo olona ifandraisanao malaza indrindra amin'ny toerana iray, mba hahay hitantana tsara kokoa ny fifandraisana amin'izy ireo.
Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka azy koa dia ny fampidirana serivisy fitahirizana rahona, zavatra tena ilaina amin'ny mpampiasa maro ary mamonjy fotoana ho an'ny asa sasany. Satria ireo serivisy ireo dia tafiditra ao anaty mpanjifa mailaka iray ihany, azonao atao ny mizara sy mandefa rakitra be dia be na dia tsy misintona azy ireo aza. Ho an'ity, misy sivana marobe mety ho hita ao amin'ny boaty, ary koa ny fikarohana mialoha izay mampiseho ny atin'ny mailaka, ny adiresy fifandraisana, na ilay rakitra mitovy aminy.
Acompli dia tonga amin'ny hevitra lehibe momba ny mandamina kokoa ny kalandrie serasera ary ny boaty mailakao. Azonao atao ny mahita ny ampahany amin'ireo fiasa ao amin'ilay horonantsary fampiroboroboana ho an'ny iOS, miandry azy havoaka amin'ny Android amin'ny fotoana iray.
anefa mety manana bibikely hafa Satria natomboka tamin'ny Android vao tsy ela akory izay dia fampiharana mahaliana ny fametrahana eo amin'ny terminal anao, manasongadina ihany koa ny endriny sy ny fomba itarihany antsika hibaiko ireo mailaka rehetra ananantsika miaraka amina fitaovana tsotra zaraina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Acompli dia tonga amin'ny Android, mailaka marani-tsaina miaraka amin'ny kalandrie ary fanampiana ho an'ny Dropbox, Drive ary OneDrive
Azo atao izao ny mitahiry ny Galaxy Note 4 sy ny Galaxy Note Edge